IAluminiyam Foam, iCopper Foam, Nickel Foam, Ingxolo isithintelo - Beihai
Sibonelela ngeMveliso ePhakamileyo
Ingcaciso yeMveliso Ubhedu lweCopper lusetyenziswe ngokubanzi njengamalungiselelo ebhetri engaphathanga nto, i-electrode substrate yebhetri ye-lithium ion okanye ipetroli, umthuthi weselfowuni kunye nezinto ezikhuselayo zombane. Ngokukodwa igwebu lobhedu sisiseko esetyenziswa njenge-elektrode yebhetri, kunye nezinto ezithile eziluncedo. Imveliso 1) igwebu lobhedu lineempawu zobushushu obugqwesileyo, inokusetyenziswa ngokubanzi kwimoto / zombane nakwizinto zombane zeradi yobushushu ...
Inkcazo yemveliso Amagwebu esinyithi esinyibilikayo luhlobo olutsha lwezinto ezenziwe ngesinyithi kunye nenani elithile kunye nobungakanani bepore kunye neporosity ethile. Izinto eziphathekayo zineempawu zobuninzi bexinano enkulu, indawo enkulu engaphezulu, ukufakwa kwamandla okuhle, amandla athile aphezulu kunye nokuqina okuthile. Umzimba ogqobhoziweyo unamandla otshintshiselwano ngobushushu kunye nokusasaza kobushushu, ukusebenza kakuhle kokufakwa kwesandi, kunye nokuqina okuphezulu kunye nokuqina. Isinyithi sogwebu esine ...
Iphaneli eguqukayo ye-Aluminium Foam ayisindi kakhulu kwaye ivumela ukukhanya kudlule. Ikwabizwa ngokuba ziipaneli zokuhombisa. Izinto ezizodwa nezibonakalayo ngokumangalisayo ezingaphezulu kolusu olunzulu zibonelela ngobuhle, ukomelela kunye nezisombululo ezingekho lula ze-acoustic kumathuba ngamacebo okuyila. Isetyenziswe ngokubanzi kumacandelo amaninzi anje: Ingaphandle lendonga yokubopha, ukuhombisa udonga ngaphakathi, iithayile zophahla, ukuphumla ...
Vula iselfowuni seAluminiyam
Inkcazo yeMveliso kunye neeMpawu ze-aluminium evulekileyo yeselfowuni ibhekisa kwi-aluminium foam enezinto ezixhumeneyo zangaphakathi, ezinobungakanani bepore ye-0.5-1.0mm, i-porosity ye-70-90%, kunye ne-porosity ye-55-65%. Ngenxa yeempawu zayo zesinyithi kunye nolwakhiwo lwe-porous, nge-hole-aluminium foam ine-absorption egqwesileyo yesandi kunye nokumelana nomlilo, kwaye ayinabungqina ngothuli, inobuhlobo kwaye ayinamanzi, kwaye inokusetyenziswa njengezinto zokunciphisa ingxolo ixesha elide phantsi kokusebenza okunzima iimeko. ...
Inkcazo yemveliso Iphaneli edityanisiweyo yeAluminiyam Foam ngemarmore emhlophe eyilitye elinzima lendalo elisikwe kwi-3mm yomaleko omncinci, ogqityiweyo kunye nokudityaniswa ne-aluminium ene-foalight. Ayigcini nje ukuqina kwephaneli kodwa nobunzima belitye lethu kukukhanya okuthe ngqo, ukuze isetyenziswe ngokulula kuluhlu olubanzi lwendalo esingaphakathi, ngaphandle, isikhongozeli (uloliwe), isikhephe okanye ikhabhathi yenqanawa yokuhamba ngenqanawa, izinto zelifti, ifanitshala kunye nezinto zokulungisa izakhiwo ezindala. ...
I-AFP eneemingxunya ezibiweyo
Inkcazo yemveliso Ukuze ufikelele kwisiphumo sokuthathwa kwesandi sangaphandle, kuhola wendlela, kuloliwe, njl. Ukubhoboza imingxunya rhoqo kwi-AFP njengenxalenye ye-1% -3%, ngokusebenza ngokugqwesileyo kwesandi kunye nenqanaba eliphezulu lokufakwa kwesandi. Ibhodi yokugquma enesandi eyenziwe ngebhodi yesandwich yegwebu yealuminium, 20mm ubukhulu, isambathisi sesandi 20 ~ 40dB. Isantya sokufakwa kwesandi esilinganiswe yindlela yokuma kwamaza ngama-40% ~ 80% kuluhlu lwe-1000Hz ukuya ku-2000H ...
Ukucaciswa kweMveliso kuvaliwe-Iseli yeAluminiyam Foam iPhaneli Isiseko soBume beKhemikhali Ngaphezulu kwe-97% yeAluminiyam Uhlobo loSeli oluValiweyo-Iseli soxinano 0.3-0.75g / cm3 Uphawu lweAcoustic Faka i-Thermal conductivity 0.268W / mK Indawo yokunyibilika. 780 ature Uphawu Olongezelelweyo amaza ombane okukhusela amandla ngaphezulu kwama-90d ...
Iimpawu zeMveliso ● Ukukhanya okuKhanyayo / ukuKhanya okuPhezulu 3mpa, 17mpa Ukugoba amandla 3mpa, 15mpa Amandla athile: Inokuthwala ngaphezulu kwamaxesha angama-60 ubunzima bayo bokumelana noMlilo, Akukho kutsha, Akukho rhasi iyityhefu yokumelana neRhasi, inkcazo yemveliso yobomi obude ...
IQela lezinto zeBEHAHAI liqela elikhulu elinabasebenzi abangaphezu kwama-2300 abaneefektri ezi-6 ezahlukeneyo. Sijonge ukuvelisa izinto zokwakha ezahlukeneyo ngaphezulu kweminyaka engama-26.
Siyinkampani yokuqala e-China eseke umzi-mveliso wayo ovelisa i-AFP (iPhaneli yeAluminiyam yeGwebu) .Sineqela lesiseko sobuchwephesha esinobuchule obuphezulu kunye namava okusebenza kweminyaka.
Iindaba kunye noLwazi
Izinto ezilula ukuzisebenzisa kwi-Intanethi yodumo-ialuminium foam
Ngaba ayifani kakhulu noyilo lwevenkile yesiqhelo yekhekhe? Ewe, ivulwe ngoMeyi kulo nyaka ivenkile yengcaciso yeHollyland LAB ekuvumela ukuba uzulazule emajukujukwini kwisitayile esinye seFuturistic, uyilo lwesithuba esingwevu-grey, isikrini esikhulu esipholileyo kunye nofakelo lobugcisa, iidizethi ezinemilo eguqukayo Yintoni eyenza ...